लकडाउनमा दूधको कारोबार स्तुल खोला वरिपरि | Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper
Published On : २८ चैत्र २०७६, शुक्रबार ०९:३२
आरुघाट बजारका सुरेश खनाल आरुपोखरीका किसानको घरबाट नियमित रुपमा एक माना दूध किन्छन् । आरुपोखरीका अर्जुन खनालले बिहान छ बजे उनको घरमै दूध पु¥याउन आउथे ।
तर अहिले लकडाउन भएपछि उनीहरुको दैनिकी फेरिएको छ । न अर्जुन दूध पु¥याउन आरुघाट बजार झर्छन्, न सुरेश दूध किन्न आरुपोखरी पुग्छन् । आरुघाट र आरुपोखरीको बीचमा पर्ने स्तुलखोला वारिसम्म अर्जुन झर्छन्, पारिसम्म सुरेश आइपुग्छन् ।
अर्जुन र सुरेशको मात्र होइन, आरुघाट र आरुपोखरीका दूध किन्ने र बेच्ने सबैको अबस्था अहिले यही हो ।
‘यसअघि त बिहानै घरघरमा दूध आउँथ्यो’, आरुघाट उद्योग वाणिज्य संघ इकाइका सदस्य सुरेश खनाल भन्छन्, ‘हामी दूध लिन स्तुलखोलासम्म जान्र्छौँ । आरुपोखरीका दूध किसानहरु स्तुखोलासम्म झर्छन् । अनि उनीहरुले ल्याएको दूध हाम्रो भाँडामा दूध खन्याउँछौं ।’ दूधको पैसा महिना, महिनामा मात्र दिने भएकाले समस्या नभएको उनको भनाइ छ ।
वडाअध्यक्षले दूध बेच्न आरुघाट बजार नजान सचेत गराएपछि गाउँले किसान र आरुघाटबजारका उपभोक्ताको स्तुलखोलामा कारोबार हुने गरेका दूधका किसान अर्जुन खनालको भनाइ छ । ‘लकडाउनको घोषणा भएको भोलिपल्टदेखि वडाअध्यक्षले अबदेखि आरुघाट बजार नजानू, कोही गएको थाह भयो क्वारेण्टाइनमा राख्छु भने’, उनले भने, ‘तपाईहरु आफ्नै लागि भनेको हुँ । अबदेखि बजारसम्म नजानू । दूध बेच्नु परेमा तपाईँहरु स्तुलखोलासम्म मात्र जानू । दूध नभै नहुने आरुघाटका मान्छे पनि त्यहाँसम्म लिन आउँछन् ।’ त्यसपछि दूध बेच्ने र किन्नेहरु स्तुलखोलामा भेटघाट हुन थालेको उनले बताए ।
दूध बेच्न आरुघाट बजार जान नपाउँदा ग्राहक घटेको आरुपोखरीकी सरस्वती खनाल बताउँछिन् । ‘पहिले पहिले १४ मानासम्म बेच्थ्यौं’, उनी भन्छिन्, ‘पहिले दूध बेच्ने मान्छे पनि ५०, ६० जनाभन्दा धेरै थिएँ । अहिले लकडाउनपछि दूध बेच्न जाने पनि घटेका छन् । लिन आउने पनि घटेका छन् ।’ पहिले धेरै दूध बिक्री हुने गरेकोमा अहिले थोरै मात्र दूध बिक्री हुने उनको भनाइ छ ।
उत्पादन भएजति सबै दूध नबिकेपछि अहिले खिर खाएर, दही बनाएर र ओल्लोघर पल्लोघरमा बाँडेर सिध्याउने गरेको उनको भनाइ छ । ‘यही दूध बेचेर घर गृहस्थी चलाएका थियौँ । अहिले दूध पनि थोरै बिक्छ । अब कसरी घर चलाउने भनेर चिन्ता लागेको छ’, उनले भनिन्, ‘भएभरको दूधजति खिर खाएर र बाँडेर सकिएको छ । अब नूनतेल केले खाने हो, थाहा छैन ।’